Izindaba - Empiresuitfabric-jjtextile
IJJ TEXTILES yibhizinisi lomthengisi wezindwangu lesizukulwane sesibili. IManchester izalwe futhi yazalelwa, izimpande zebhizinisi labo zigxile kuphela efeni likakotini nezindwangu laseManchester. Izizukulwane ngaphambi kokwakha futhi zathuthukisa umsebenzi omkhulu kunayo yonke wokuvula indwangu eYurophu, ngawo-1980 nawo-1990.
Ezikhathini zakamuva kakhulu baqhubeke bacindezela imingcele yokuziphatha kwabo kokuthenga. Bebelokhu bethola njalo amasudi amahle kakhulu emakethe kufaka phakathi, iScabal, iWain Shiell, iHolland neSherry, uJohnstons wase-Elgin, uHield, uMinova, uWilliam Halstead, uS.Selka, uJohn Foster, uCharles Clayton, uBower Roebuck, uDormeuil ukubala nje ezimbalwa. Banakho, ikakhulukazi eminyakeni yamuva nje abazakhele idumela lokuba nezindwangu zesudi ezinhle kakhulu emhlabeni.
Njengoba sazi, igama lendwangu yesudi limelela idumela namandla omkhiqizo wenkampani. Ukuchuma hhayi ukusinda nje. Kulesi senzakalo, uJJ Textile Manchester ufisa ukuthi amabanga abo alukiwe afane nekhwalithi njengoba benethemba lokuthi igama labo lizokwaziwa njengekhaya lezindwangu ezisezingeni eliphakeme. Ngemuva kokubambisana kwamamitha angama-4500 amamitha we-TR suit, sithole ukuzethemba, inhlonipho nokwethenjwa kumakhasimende ethu ase-UK. Kulezi zinsuku asigcini ngokubakhiqizela indwangu yesudi, kepha sibeka negama elithi - “Finest suiting JJ Textile Manchester” kuso. Njengoba sigcizelele, uma sivunyelwe ukubeka igama lekhasimende lethu endwangu yethu sizoqinisekisa ukuthi isikhathi, umzamo, umcabango nokunakekelwa kuzobe kungenile kulezo zindwangu. Sima siqinile nekhasimende lethu.
Isikhathi Iposi: Feb-18-2021